चाणक्यका अनुसार कस्तो महिलासँग विवाह गर्दा उत्तम हुन्छ ? – रुपान्तर
मुख्य पृष्ठरोचकचाणक्यका अनुसार कस्तो महिलासँग विवाह गर्दा उत्तम हुन्छ ?
चाणक्यका अनुसार कस्तो महिलासँग विवाह गर्दा उत्तम हुन्छ ?
चाणक्य नीतिमा कस्तो महिलासँग विवाह गर्दा उत्तम हुन्छ भन्ने बारे बताईएको छ ।
उक्त नीतिमा आचार्य चाणक्यले महिलाहरुको स्वभाव, उनीहरुको सोच, ब्यवहारका बारे बिचार गरेर विवाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । चाणक्य भन्छन्,’ महिलामाथि चाँडो विश्वास गर्नु हुँदैन । महिलाले कुनै पनि कुरा लामोसमयसम्म मनमा राख्न सक्दैनन ।’
श्लोकमा आचार्य चाणक्यले स्त्रीको सुन्दरतालाई गौण मानेका छन् । यदि कुनै पुरुष स्त्रीको सुन्दरता देखेर विवाह गरेमा पुरुषको गल्ती हुने बताएका छन् । साथै उनले त्यस्ता पुरुषलाई मूर्खको संज्ञा दिएका छन् । विवाहको लागि स्त्रीको संस्कार, स्वभाव, लक्षण र गुण– अवगुणको बारेमा जानकारी लिनु पर्ने चाणक्य बताउछन् । अन्यथा सुन्दरताका नाममा गलत स्त्रीको छनौटबाट परिवारमा दुःख आउन सक्ने उनको तर्क छ ।